Cabbirka iibka kulul 00 Hufan/cad Kabaha kaabsal madhan oo leh alaab HPMC ah
Waxyaabaha ceeriin ah:
Cellulose Khudaarta HPMC
Wakhtiga Kala -tagga:
Hore loo xidhay
1. Alaabta ceeriin waxay ka timaadaa shirkadeena oo leh dabeecado dabiici ah iyo kuwo dabiici ah.
2.Healthful, Tayada sare, qiimaha wanaagsan & waqtiga dhalmada
3.Halal & Kosher & Shahaadooyinka ISO & cGMP & BRC
4.GMO Bilaash ah, Xasaasiyad Xor ah, BSE/TSE Bilaash
1.Qiimaynta sare iyo heerka buuxinta
3.HPMC waxay ka timaadaa soosaarka alwaaxda ee Yurub ama Ameerika.
Kaabsalka qudaarta ee HPP wuxuu kaloo midabayn karaa midabyo dabiici ah oo la cuni karo. waxaana lagu daabici karaa khadad daabacan oo dabiici ah si loo garto badeecadaada suuqa. Ka sokow, kaabsoosha qudaarta ayaa si habsami leh ugu socota dhammaan noocyada xawaaraha sare iyo mashiinnada buuxinta semi-otomatiga ah.
5.Dabiiciga ah oo aan lahayn aalkolada, dhadhanka iyo urta ayaa si fiican loo dabooli karaa.
Welwelka caafimaadka, horumarka joogtada ah ee mustaqbalka
Horumarinta Tiknoolajiyadda oo la soco abuur
Barashada Joogtada ah si aad u dhaafto naftaada
Si buuxda loogu deeqay badeecadaha iyo shaqada
Shaqo adag oo joogto ah si loo jebiyo caafimaadka macaamiisha
Xakamaynta tayada alaabta ceeriin:
Si loo dammaanad qaado badbaadada iyo xasilloonida, dhammaan alaabta ceyriinka ah ee kaabsalkeenna si adag ayaa loo baaraa iyadoo la raacayo heerarka tayada Ganacsiga ee lagu sameeyay saldhigyada dawooyinka dawliga ah.
Xakamaynta Tayada ee Warshadaynta:
Kormeerka muunad qaadista waxaa la qabtaa inta lagu guda jiro geeddi -socodka soo -saaridda si dhammaan cabbirrada loogu hayo baaxadda caadiga ah si loo xoojiyo xasilloonida tayada.
Kala -diridda xabagta: Heerkulka, midabka iyo is -beddelidda ayaa lala socdaa iyada oo si adag loo ilaaliyo.
Soosaarka Kaabsulka: muuqaalka, cabirka iyo qoyaanka waxaa hubiya kontoroolaha tayada. Heerkulka deegaanka iyo heerka qoyaanka qolka warshadda, iyo sidoo kale dheef -shiid kiimikaad iyo heerkulka waxaa kormeera hawlwadeenka.
Habka Baadhitaanka: Kaabsoolka la kala soocay ee mashiinka kala -soocidda ayaa kormeeraya tayada xakamaynta si uu u hubiyo in dhammaan kaabsalka iibku ay buuxiyaan heerarka tayada. Halbeegga kala -soocidda waxaa hagaajiya oo maamula shaqaalaha mas'uulka ka ah kala -soocidda mashiinka.
Maareynta Badeecadda ee Dhameystiran:
Tilmaamaha jirka iyo kiimikada ee kaabsulka la dhammeeyay ayaa la hubin doonaa ka hor baakadaha. Kaliya kaabsulka u qalma ayaa loo buuxin doonaa macaamiisha.
Raad -raaca Alaabta:
Marka la eego xeerka GMP, dhammaan kaabsulka waxaa ka buuxa lambar dufcad cad oo diiwaanada tayada ayaa loo sameeyay raadraaca haddii loo baahdo.
Tirada halkii sanduuq (gogo ')
NW sanduuq kasta(KG)
Celceliska NW sanduuq kasta (KG)
Waxaa lagu safay laba lakab oo baco ah waxaana lagu soo xiray baakado
Hore: Heerka buuxinta sare ee iibinta kulul ee kaabayaasha cabbirka 0 khudaar madhan hpmc kaabsal
Xiga: Baakadaha Eco-si xor ah oo midabaysan oo dabool leh oo dabool leh oo dabool leh astaanta aluminium-bireedka koobabka qaxwada ee la tuuro oo madhan
Kaabsoolada Madhan ee Dareeraha ah
Kaabsoolada Maran Cabbirka 1
Miraha & Khudaarta Nolosha 250 Kaabsoosha
Cabbirka 4 Kaabsoosha Gelatin
Kaabsoolada Maran ee Jumlada ah
Heerka Buuxinta Sare Kaabsul Maran Khudaar Cad
Qiimaha buuxinta sare ee iibinta kulul ee kaabayaasha si ...
Khudaarta madhan HPMC qolof kaabsal
Heerka buuxinta sare 00 0 1 2 hpmc madhan oo adag ...